आदर्श विद्यालय बन्दै निष्पक्ष मावि - Likhu Online
आदर्श विद्यालय बन्दै निष्पक्ष मावि
२१ चैत्र २०७७, शनिबार १३:४६ प्रकाशित
कास्की : जिल्लाको माछापुुुछ्ररे गाँउपालिका वडा नं. ५ मा अवस्थित निष्पक्ष माध्यमिक विद्यालयले समयसापेक्ष आफुलाई आधुनिक र विद्यार्थीमैत्री बनाँउदै लगेको छ ।
समयको माग र निजिविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भए पछि विद्यालयले सहज वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न योजाना बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र आदर्श विद्यालयकोरुपमा स्थापित गर्न वि.सं. २०७५ सालबाट विद्यालयका भौतिक संचना देखी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कुरामा समय अनुसार परिवर्तन गर्न लागिएको कुरा विद्यालयका प्रधानाध्पक दुर्गाबहादुर रावतले बताउनु भयो ।
२५० जना विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा जन्मा २० जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन भने मावि स्तरको दरबन्दि एउटा मात्र छ । निमाबिमा ३ राहत दरबन्दी छन, प्राविमा ७ दरबन्दी छन् भने वालविकासमा २ दरबन्दी छन् र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी एउटा छ । बाँकी जनशक्ति स्थानीय श्रोतबाट धानिएको छ । भने विद्यालयको अवधाराण र आदर्श विद्यालयको रुपमा गाँउपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको छ ।
२०७५ साल यता विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याव तथा बाल शिक्षणको लागि कार्पेट बिछ्याउने काम भएको छ । यसले शिक्षणमा अझ सहज, सरल र प्रभावकारी भएको छ । विद्यालयका प्रारम्भिक कक्षाका शिक्षण मन्टेश्वरी अनुसार गरिन्छ साथै विद्यालयमा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन हन्छ ।
सिमित श्रोत साधनको वाजुत पनि विद्यालयको टिम मिलेको र स्थानीय तथा अभिभावकको सहयोग भएकोले विद्यालयमा क्रमिक सुधार भएको कुरा पनि प्र.अ. रावतले बताउनु भयो ।
विद्यालयका संस्थापक प्रमुख द्वारा विद्यार्थीका लागि स्टेशनरी सामग्री हस्तान्तरण
पाल्पामा दलित वस्तिको घर- घरमा खानेपानीको धारा
दोलखामा सवारि दुर्घटना, ४ को मृत्यु, वडा अध्यक्ष सहित १८ घाइते
अर्घाखाँचीमा पहिरो पिडित परिवारलाई बाख्रा वितरण
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित ७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर